Moldavia: Miandry olona hafa mpametraka mpitondra ? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Mey 2020 15:24 GMT
Vakio amin'ny teny русский, українська, Français, Italiano, English
“Aza mifidy mpitondra mpanefoefo,” hoy ny fivakin'ny afisy tany Chișinău talohan'ny fifidianana parlemantera tamin'ny volana Febroary 2019. Sary (c): Maxim Edwards. Nahazoana alàlana.
Tsy zava-baovao ho an'i Moldavia ny politika misafotofoto. Araka ny fomba fijery ifanekena, dia firenena misisika eo anelanelan'i Okraina sy Romania, tafiditra eo anelanelan'i Rosia sy ny Tandrefana, ary heniky ny fahantrana sy ny kolikoly izy io. Tamin'ny ririnin'ny taona 2018, nanjary feno ahiahy momba ny fampanjakana ny ara-dalàna ny Vondrona Eoropeana (EU) ka nanambara an'i Moldavia ho “fanjakana babon'ny tombontsoan'ny mpanefoefo.”
Tamin'ny taona 2019, nitranga ny tsy noeritreretina. Tamin'io volana Jona io, nampangina ny tsi-fitovian-keviny ny samy antoko mpanohitra, prô-Eoropeana sy prô-Rosiana, ary nifidy ny hanesorana ny Antoko Demaokratikan'i Moldavia (DPM) malaza ratsy. Tonga teo amin'ny fahefana ny fiaraha-mitantana sarotra notanterahina nentin'i Maia Sandu, mpitarika ny vondrona ACUM . Niresaka momba ny fanadiovana ny firenena izy sy ireo mpiara-dia aminy ao amin'ny Antoko Sosialista (PSRM), namerina ny fahatokisan'ireo fikambanana iraisam-pirenena sy ny “deoligarchisation.” Nandositra ny firenena tsy ela taorian'izay ny filohan'ny DPM Vladimir Plahotniuc, izay noheverina ho mpitondra ao ambadika ao amin'ny firenena.
Tsy naharitra ny andrana. Tamin'ny volana Novambra lasa teo, lasa sakana ny fifandirana teo amin'ny ACUM sy ny Sosialista mpiara-dia aminy momba ny fanavaozana ara-pitsarana. Nesorin'ny PSRM, nampian'ny DPM, tamin'ny latsabato ny governemantan'i Sandu. Ankehitriny, ny sosialista no mitantana ny baolina amin'ny politika Moldaviana. Mikatsaka ny ho voafidy indray ho filoham-pirenena amin'ity fararano ity i Igor Dodon, mpitarika tsy ofisialin'ny antoko .
Manontany tena momba ny hoaviny ny Moldaviana nandritra ny fiatombohan'ny fiaraha-mitantana naharitra fotoana fohy. Moa ve ny “deoligarchisation” natokana ho lamaody vetivety monja? Harahan'asa ve ny kabarin'ny pro-Rosiana sosialista? Ny tena zava-dehibe indrindra amin'izany rehetra izany dia manontany tena ry zareo hoe novakivakian'ny politika moldaviana ve ny ranomody (boribory vetaveta) fahazaran'ny mpandresy mihinam-be ary mbola maka mihoatra hatrany — na iza na iza no mpandresy eo ? Raha mbola mampanantena poak'aty hatrany, dia ho tahaka izany koa ny fanantenana amin'ny hoavy tsara kokoa — hoavy izay tadiavin'ny tanora Moldaviana an'arivony any andafy amin'izao fotoana izao anefa.
Lahatsoratra maro momba ny fitantaranay manokana no tanteraka noho ny fiaraha-miasa niaraka tamin'ny Transitions, fikambanana mpamoaka boky sy fanofanana fampitam-baovao any Prague
Vakio bebe kokoa ireto tantara manaraka ireto araka ny tohin'ny fanavaozam-baovao ato amin'ity pejy ity:
Azia Atsimo 23 ora izay